Bandow Lagu Soo Rogey Baardheere,Ganacsagii iyo goobaha Waxbarashada oo xiran – War La Helaa Talo La Helaa
Bandow Lagu Soo Rogey Baardheere,Ganacsagii iyo goobaha Waxbarashada oo xiran
Wararka naga soo gaarayo gobolka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamada ammaanka ee Jubbaland ee ku sugan degmada Baardheere ay saakay bandow ku soo rogeen degmadaasi.
Waxaa gabi ahaanba istaagay howlahii ka soconayey degmada Baardheere sida goobahii ganacsiga, dugsiyadii waxbarashada, isku socodka dadka iyo gaadiidka. waxaana waddooyinka xaafadaha magaalada iyo jidadkaba gaaf wareegaya Ciidamada oo dadweynaha ugu baaqaya inay guryahooda dib ugu laabtaan.
Tallaabadni ayey Ciidamada kaga hor tagayaan isku dhac laga cabsi qabo inuu ka dhaco gudaha magaalada,isku dhacaasi ayaa waxuu salka ku hayaa khilaaf dhanka maamulka Baardheere la xariira, kaasi oo muddo ka badan 4 bilood soo jiitamayey, una dhaxeeya gudoomiayhii Baardheere iyo ku xigeenkiisa oo Labadooduba kala wata Dekreeto Guddoomiye oo ka soo baxdey wasaaradda arrrimaha gudaha Jubbaland.
Waxaana lagu guul dareystey dhex-dhexaadin la doonayey in lagu xalliyo khilaafkaasi oo ay hormuud u ahaayeen Saraakiisha Ciidamada AMISOM, kuwa Jubbaland iyo waxgaradka degmada Baardheere ,waxaana dhici kara saacad kastaba haddii aanan la helin xal isku dhac u dhaxeeeya Labada dhinac.
WARBIXIN:- Siyaasiyiinta Is-Maan-Diidan Ma Yihiin Kuwo Beekhaamin Kara Rajada Ummadda Iyo Danaha Qaranka ?
XOG: Xildhibaano Hal arrin darteed loogu diiday iney la kulmaan Madaxweyne Farmaajo